ကြယ်စင်အလင်း: အိုင်တီပစ္စည်းများနှင့် ISO လက်မှတ်
အိုင်တီပစ္စည်းများနှင့် ISO လက်မှတ်
ဒီပိုစ့်က ကျွန်တော့်အလုပ်အကိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးတဲ့ပထမဆုံးပို့စ်တခုပါ။ ဘာရယ်လုို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ အပျင်းပြေဖြစ်အောင်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်သဘောကို ဘယ်လိုနားလည်သဘော ပေါက်တယ်ဆိုတာရယ်၊ မသိသေးတဲ့သူတွေကိုလဲ ဗဟုသုတအဖြစ်ဖြန့်ဝေချင်တာရယ်ပါ။ ကျွန်တော် ဒီအလုပ်ကိုလုပ်တာ ၁နှစ်ကျော်ပဲရှိပါသေးတယ်။ အဲဒီတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ပြီး စစ်မေးတဲ့သဘောရယ် အင်တာနက်ကနေ ပိုလေ့လာဖြစ်သွားရယ်အောင်ရေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အမှားတွေပါခဲ့လို့ရှိရင်၊ ထင်မြင်တာတွေလွဲမှားနေရင် ထောက်ပြပေးစေလိုပါတယ်။ ခုကျွန်တော်ရေးမှာက လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ သူ့ရဲ့အရည်အသွေးမှီလက်မှတ်ရဖို့ လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကို အကြမ်းဖျင်းပြောပြတာပါ။ ယနေ့ခေတ်မှာ အိုင်တီပစ္စည်းများကို နေရာအနှံ့မှာ ကျယ်ပြန့်စွာသုံးစွဲနေကြပါတယ်။ ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ၊ ပရင်တာ၊ တီဗီ စတာတွေကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှထိတွေ.နေရပါတယ်။ ဒီလိုအိုင်တီပစ္စည်းတွေမှာ လူတွေအတွက် ကျန်းမာရေး၊ ဘေးအန္တရာယ်လုံခြုံရေးတွေကို အနဲနဲ့အများ၊ ရေတိုရေရှည် ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတာပါ။ အဲဒီတော့ စက်ပစ္စည်းတွေရဲ့ အရည်အသွေးကို စစ်ဆေးတိုင်းတာဖို့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့.အစည်းတခုဖြစ်တဲ့ ISO(International Standard Organization) ကိုတည်ထောင်လိုက်တာပါ။ ဒီအဖွဲ့.အစည်းက စက်ပစ္စည်းတွေကိုပဲ စစ်ဆေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ထဲကို ရောင်းချမယ့် ပစ္စည်းတိုင်းလိုလိုကို သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေအရ စစ်ဆေးကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလဲ အချို.ကြော်ငြာတွေမှာ ISO 9001 အရည်အသွေးမှီ ဘာညာဆိုပြီးတွေ.ဖူးကြမှာပါ။ ခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာက အိုင်တီပစ္စည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေပါ။ စက်ပစ္စည်းတွေတိုင်းလိုလိုမှာ အောက်ခြေဖက် ဒါမှမဟုတ် ဘေးဖက်တွေမှာ စတစ်ကာတွေ ကပ်ထားတာကိုမြင်ဖူးကြမှာပါ။ အောက်ကပုံက Asus notebook ရဲ့ လေဘယ်လ် တခုပါ။ လက်တော့တော်တော်များများရဲ့ အောက်ဖက်မှာကပ်ထားတာကိုတွေ.ရမှာပါ။ သိချင်ရင် မိမိတို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာကို လှန်ကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်။း)
ပုံထဲမှာ CE, FCC, CCC ဆိုတဲ့စာလုံးတွေရယ်၊ ညာဖက်ကိုထိုးနေတဲ့မျှားပုံတွေရယ် မြင်ကြမှာပါ။ အဲဒီသင်္ကေတတွေက နိုင်ငံအသီးသီးဆီကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ CE သင်္ကေတက ဥရောပနိုင်ငံတွေကို တင်ပို့ရောင်းချမယ့်အခါ မရှိမဖြစ်ပါရမယ့် တံဆိပ်ပါ။ အဲလိုပါပဲ FCC က အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ CCC က တရုတ်ပြည်၊ မျှားပုံက ထိုင်ဝမ်ကို ကိုယ်စားပြုတာပါ။ ဆိုတော့ ဒီအမှတ်တံဆိပ်တွေပါတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ ရောင်းချခွင့်ရှိပါတယ်။ CE အမှတ်တံဆိပ်ကပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေက ဥရောပမှာထုတ်လုပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေလို့မဆိုလိုပါဘူး။ ဘယ်နိုင်ငံကပဲဖြစ်ဖြစ် ဥရောပနိုင်ငံတွေကို မိမိတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ရောင်းချချင်တယ်ဆိုရင် အဲဒီနိုင်ငံက သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံနှုန်း၊ ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီဖို့လိုပါတယ်။ လုံခြုံစိတ်ချရမှု၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ဘေးဥပဒ်ရှိမရှိစတာတွေကို စစ်ဆေးကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ မိမိတုို့ ၀ယ်ယူမယ့် ပစ္စည်းတွေရဲ့ အရည်အသွေးကုို စိတ်ချရစေချင်တယ်ဆုိုရင်တော့ ဒီလုိုအမှတ်အသားပါတဲ့ ပစ္စည်းတွေကုိုပဲ ရွေးချယ်ဝယ်ယူကြပေါ့ဗျာ။ အာရှမှာလဲ CE အမှတ်အသားပါတဲ့ ပစ္စည်းတွေကုိုပဲ တွေ.ရမှာပါ။ အဲ.... ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် မြန်မာပြည်ပြန်တုန်းက TV ၀ယ်တာ ဘာအမှတ်အသားကုိုမှမတွေ.ဘူးဗျ။ ဖင်ပြန်ခေါင်းပြန်ရှာတာ မတွေ.ဘူး။ တံဆိပ်က နာမည်ကြီး ဂျပန်တံဆိပ်ပဲ။ Made in Thailand တဲ့။ ခုကျွန်တော့်အလုပ်က စက်ပစ္စည်းတွေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံနှုန်းမှီမမှီစစ်ဆေးပေးရတဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်းသဘောမျိုးပါ။ အိုင်တီပစ္စည်းတွေအတွက်ပဲသီးသန်. စစ်ဆေးခွင့်ရထားတဲ့အတွက်ကြောင့် တခြားကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ စစ်ဆေးလို့မရပါဘူး။ အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာတွေကတော့ EMC(Electro Magnetic Comapatibility) ဆိုတာကို ကြားဖူးကြမှာပါ။ R & D အင်ဂျင်နီယာသမားများ မိမိတို့ထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေ Radiation ထုတ်လုပ်မှုပမာဏဘယ်လောက်ရှိမရှိ ၊ Noise ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာ အထိထွက်သလဲဆိုတာကို အမြဲစစ်ဆေးကြရပါတယ်။ အဲဒါကိုတော့ Radiated Emission လို့ခေါ်ပါတယ်။
အပေါ်ပုံက electronics devices တွေရဲ့ Radiation ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ ကုိုတိုင်းတာတဲ့ အခန်းတခုပါ။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏထက်ကျော်လွန်နေရင် အဲဒီပစ္စည်းတွေကုို ထုတ်လုပ်လုို့မရသေးပါဘူး။ အဲဒီတော့
Radiation ပမာဏလျော့ကျအောင် အင်ဂျင်နီယာများ ခေါင်းခြောက်ခံပြီး ပြန်ပြုပြင်ကြရပါတယ်။ အင်ဂျင်နီယာ အခေါ်တော့ countermeasure ပေါ့။ ပုံကိုကြည့်ရင် အဲဒီအခန်းက ဒီဇုိုင်းထူးခြားပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတယောက်ကုိုတောင် နောက်ဖူးတယ်..း)။ Whatsapp msgr ကနေ ပုံပုို့ပြီးပြောလုိုက်တယ်။ အဲဒါ ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ စတူဒီယုိုကြီး။ ကုိုရီးယားပေါ့အဆုိုတော်များ MTV လာရုိုက်ကြတယ်လုို့။ အခန်းက MTV မှာရုိုက်ကြတဲ့ပုံစံနဲ့တူနေတာကုိုး။ Pop အဆုိုတော်များ 2NE1, BigBang တုို့တွေ လာရုိုက်ကြတယ်လုို့ နောက်လုိုက်တာ အဟုတ်ထင်နေတယ်...း)။ လုပ်ဖော်ကုိုင်ဖက်တွေကလဲ လူငယ်တွေဆုိုတော့ အလုပ်ပါးရင် အဲဒီအခန်းထဲဝင်ပြီး ဓါတ်ပုံရုိုက်ကြ၊ သီချင်းဖွင့်ပြီးတော့ ကကြတာ။ မှတ်မှတ်ရရ Super Junior ရဲ့ Sorry Sorry သီချင်းနဲ့ အဖွဲ.လုိုက် သောင်းကျန်းလုိုက်သေးတယ်။
Electronic products တွေကုို Radiation တခုတည်းစစ်ဆေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ Testing အမျိုးအစား ၁၁ခု
ရှိပါတယ်။ အကုန်လုံးကုိုတော့ ပြောပြလိုက်ရင် စာဖတ်သူများ ခေါင်းမူးပြီး ပုို့စ်ကုို ပိတ်ပစ်သွားမှာ..း)။ အကြမ်းဖျင်းကတော့ လျှပ်စီးလက် မုိုးကြိုးပစ်တာကုို ခံနုိုင်စွမ်း(Lightning Surge)၊ အခြား လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ Radiation ထုတ်လွင့်မှုကုို ခံနုိုင်ရည်ရှိမရှိ(Radiated Immunity)၊ လျှပ်စစ်မီး မငြိမ်မသက်ဖြစ်တာ၊ တချို. ပစ္စည်းတွေက ဖွင့်လုိုက်ရင် မဆီမဆုိုင် မီးချောင်း မီးလုံးတွေ ဖြတ်ခနဲ မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ်ဖြစ်သွားတာကုို ကြုံဖူးကြမှာပါ။ အဲဒါက power supply ကို အနှောင့်အယှက်ပေးတော့
အသုံးပြုနေတဲ့ အခြား ပစ္စည်းတွေကုိုလဲ သွားနှောင့်ယှက်တတ်ပါတယ်။ အဲလုိုမျိုးတွေကုို စစ်ဆေးရတာပါ။
တချို.သော ပစ္စည်းတွေက Lighning surge ကုိုခံနုိုင်ရည်မရှိတော့ စစ်ဆေးနေတုန်း ထပေါက်တတ်ပါတယ်။
ကဲ..စာဖတ်ပရိသတ်တွေလဲ electronic ပစ္စည်းတွေဝယ်ရင် CE အမှတ်အသားအနဲဆုံးပါတာကုိုတော့ ရွေးဝယ်ရမယ်မှန်းသိပြီထင်ပါတယ်။ ဗဟုသုတ တခုအနေနဲ့ပြောပြချင်သေးတယ်။ CE တံဆိပ်ပါတဲ့ ပစ္စည်းတွေက ဗုို့အား ၂၀၀-၂၄၀ သုံးပါတယ်။ FCC(အမေရိကန်) ဆုိုရင် ဗုို့အား ၁၂၀၊ VCCI (ဂျပန်) က ဗုို့အား ၁၀၀ သုံးပါတယ်။ ပလပ်ခေါင်းတွေကလဲ မတူပါဘူး။
အပေါ်ကပုံမှာပြထားတဲ့ ပလပ်တွေက နုိုင်ငံအသီးသီးမှာ အသုံးပြုကြတဲ့ပလပ်တွေပါ။ အဲဒီနုိုင်ငံမှာ သုံးမယ့်
ပစ္စည်းတွေကုိုလဲ အဲဒီလုိုပလပ်ခေါင်းတွေနဲ့ပဲထုတ်လုပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တုို့မြန်မာနုိုင်ငံမှာ အဲဒီလုို
စနစ်တကျမသတ်မှတ်ထားသေးတော့ အဆင်ပြေသလုိုသုံးရတာပေါ့။ ပလပ်ပေါက်အစုံပါတဲ့ Adapter တွေနဲ့ သုံးကြပါတယ်။ ဂျပန်နုိုင်ငံမှာပဲ သုံးဖုို့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကုို အခြားနုိုင်ငံတွေရင် သတိထားရပါတယ်။ ဘာလုို့လဲဆုိုတော့ ဂျပန်က ဗုို့အား ၁၀၀ပဲအသုံးပြုတာပါ။ အဲဒီပစ္စည်းကုို ဗို့အား ၂၂၀ သုံးတဲ့ စင်ကာပူမှာလုို လာသုံးရင် မိမိရဲ့ပစ္စည်းကတော့ လောင်ပြီသာမှတ်ပေတော့။ အလုပ်မှာလဲ အဲလုိုဖြစ်ပေါင်းများပြီ. သတိလွတ်လွတ်သွားလုို့..း)။ ဒါပေမယ့် ၁၀၀-၂၄၀ ပြထားရင်တော့ ဘယ်မှာမဆုို သုံးရအဆင်ပြေပါတယ်။ ကဲ မိတ်ဆွေတုို့ Electronic ပစ္စည်းတွေကုို ဈေးကွက်ထဲရောက်အောင် ဘယ်လုို
စစ်ဆေးခဲ့ရတယ်၊ နုိုင်ငံတခုချင်းစီရဲ့ စံနှုန်းကွာခြားချက်တွေ ဘယ်လုိုရှိတယ်ဆုိုတာကုို ဒီပုိုစ့်ကနေ အနဲအကျဉ်းတော့ သိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ ဒါက ကျွန်တော် သိသလောက် တတ်သလောက်ပြန် ဖြန့်ဝေတာပါ။ စာဖတ်သူတုို့တွေလဲ ကော်မန့်ဘောက်စ်မှာ ရှယ်နုိုင်ပါတယ်။ Sharing is Caring မဟုတ်လား..း)။
Posted by ကြယ်စင်အလင်း at Sunday, August 05, 2012
[p]21 Black Street allows the authors to collaborate with acquaintances to generate, publish and advertise contents that are of high value . 5-inch speakers located [url=http://www.solobeatsbydre.co.uk]cheap beats by dre earphones[/url] in the rear doors . Monster Studio Champagne Beats By Dr Dre
Dr Dre headphones tend to be integrated with the fantastic cable to improve the particular function as lengthy as the identical broadcast from the sound and power [url=http://www.solobeatsbydre.co.uk]cheap solo beats by dre [/url] power to headsets . Dre have reachedanew level of excellence by dishing outapair of headphones that are for more than just carrying around for street cred . In addition, bane resistance, to aerate the mini-jacks 24 k gold arresting transmission . Dre collaborated to designaheadphone withaperfect fit so you can play harder while hearing your music and at the same time have an environment that is still audible . Eminem waltzed out casually, his hoodie pulled up, to salute Dre隆炉s work with some verses 隆陋 the best of which wasasnippet of 隆掳Forgot About Dre,隆卤aDre track from 2001 . Now many beat building software program can cost you numerous bucks and commonly come with an extensive studying curve to match.[/p][p]The real need to play [url=http://www.solobeatsbydre.co.uk]cheap beats by dre[/url] actively is essential . Libratone Beat has two input methods:a3 . You can get superior sound quality withahigh degree of fidelity with both the wired and the wireless [url=http://www.solobeatsbydre.co.uk]solo beats by dre[/url] varieties . Okay, I trd t lik them . And this is one unique [url=http://www.solobeatsbydre.co.uk]beats by dre earphones[/url] crew . Read more:Beats By Dre Headphones . Beats Electronics and Monster are not renewing their headphones contract afterafive year partnership.[/p]
[p]Tiffany jewelry sale , With sterling silver jewelry you can easily say that you are entertaining and cool whilst then again furthermore, it says sophisticated, sophisticated and decent . [url=http://www.distiffanyforsale.com]tiffany online[/url] Dr . ) . The company's success is mainly due to its strong faith, Tiffany has always paid great attention to product design and manufacturing techniques, in addition, Tiffany more often put some outdated ideas and designs into modern life, make the products become turned [url=http://www.distiffanyforsale.com]tiffany jewelry outlet[/url] both primitive original and fashionable modern . The turn of the 20th century, Tiffany (Tiffany) brand for [url=http://www.distiffanyforsale.com]tiffany outlet store[/url] the first time to use stainless steel jewelry box, and stressed the need to silver, not gold . Meanwhile the Na'vi [url=http://www.distiffanyforsale.com]tiffany outlet online[/url] are acquiring slaughtered along with the Hometree is destroyed . Tiffany co , Sterling silver jewelry stays as brand new as constantly and providesafashionable, sexy appear each and every girl wants . Don隆炉t write long [url=http://www.distiffanyforsale.com]tiffany heart necklace[/url] sentences or paragraphs.[/p]
Music I listen (4)
De Beeldspraak van De Tarot(တာရော့ ၏ ပုံရိပ်များ )
Trump pulls back on designating Mexican drug cartels as 'terror' groups
ရှလှေနျးလိပျပွာ ရဲ့ ခြိတျဒီဇိုငျးသဈတှနေဲ့ မကွီးစိုး၊ သကျမှနျ၊ မယျလိုဒီ...
Planet : Welcome to Planet Myanmar.
Myitkyina Online - Discover Connect Share
The Best Myanmar Website :: Myanmar News